राष्ट्रिय जनमोर्चा – संघियता नेपाली जनताका लागि अफाप – गोपाल गिरी
By vijayafm on	 November 17, 2017 फोटो फिचर, राजनीति, विविध खबर, स्थानीय
नवलपुर, १ मंसिर । नवलपुर क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभाका राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार गोपाल गिरीले वर्तमान समयमा आफ्नो दल विकल्पको रुपमा अघि आएको बताउनुभएको छ । ठूलादलहरुप्रति निराशा बढीरहेको वर्तमान सन्दर्भमा आफ्नो दल विकल्पको रुपमा उदाउने बताउनुभयो । नवलपुर क्षेत्रमा सुशासन, भष्टचार नियन्त्रण, र पर्यटन तथा कृषि लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि आफूहरुले उम्मेदवारी दिएको गिरिले बताउनुभयो । विजय एफ एमसंग कुरा गर्दै गिरीले विगत चार वर्षमा आमजनताको विचार परिवर्तन भएको जिकिर गर्दै आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको बताउनुभयो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने बताउने गिरीले संघियता खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो संघियता नेपाली जनताका लागि अफाप छ । विरालो बाँधेर श्राद्ध गर्न गर्ने आजको राजनीतिक परिवेश सधैँ टिकिरहन नसक्ने र समाज गतिशिल भएकाले अबको राष्ट्रिय जनमोर्चाको रहेको गिरीले बताउनुभयो । गिरीसंग भएको विशेष कुराकानी आज बेलुका साढे ८ बजे र भोली विहान ७ बजेको मिसन इलेक्सनमा सुन्न सक्नुहुने छ ।
यसैबीच चुनावी अभियानमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आज यस क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा चुनावी कार्यक्रम गरेको छ । आज गैँडाकोट १ र २, अमरापुरी क्षेत्र र नवलपुर क्षेत्र नं. २ मा घरदैलो कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएको बताउनुभयो ।